Umenzi weBhanner yasimahla yeeNtengiso zikaGoogle Ads UMyili weBhanile
Yakha iiNtengiso Ads zikaGoogle ezisebenzayo kunye Clever Ads zeClever
Enoba ufuna ukwakha wakho Banner Ads ngesandla, okanye ube nabo ezijikeleziswa ngokuzenzekelayo: Clever Ads Banner uMdali apha uncedo ngaphandle kweendleko kuwe.
DALULA GOOGLE ADS IIMPAWU ZESIMAHLA
Ungaqala njani ngo- Clever Ads Banner Mdali?
Khetha nokuba zezaNtengiso zakho Google Ads Izitshisi zenziwa ngokuzenzekelayo okanye zenziwe ngesandla.
Isibhengezo sakho se-AMP kunye ne-HTML5 siza kwakhiwa ngokukhawuleza kuzo zonke Google Ads ubungakanani besibhengezo.
Ngaba izibhengezo zakho Google Ads akhawunti okanye ukhethe ukuyikhuphela. Zombini ezinokukhethwa simahla!
Kutsala izithuthi obunyanisekileyo Iintengiso yakho Display Google
Display Google Iibhenari Indalo Manual
Ufuna ukuba unolawulo olugqityiweyo lwe Google Bonisa iibhodi indalo yakho uze utsibe umsebenzi onzima? Konke kufuneka uyenze ukulayisha imifanekiso yakho logo, ukudala ikopi yakho uze ukhethe ikhwelo lokuba kusetyenzwe. Siye ke ngoko ke ukusuka apho!
Display Google Banners Automatic Generation
Musa ukuzikhathaza iikopi ad, imifanekiso ukhetha, ayile iibhanile, njl Konke kufuneka wenze kukuthi faka website yakho URL kwaye siza ukuqwalasela asethi isebenzayo ukwakha amalaphu anomyalezo yakho Display Google.
Yenza iintengiso zakho ze-HTML5 Google Ads izibhengezo zokuthetha nabaphulaphuli bakho
Clever Ads Banner uya kukuvumela ukuba wenze ngokwezifiso izicatshulwa zentengiso, imifanekiso kunye nemibala nokuba ikwindlela ezenzekelayo okanye yemanyuwali.
Ngomnye wethu I-HTML5 Isibhengezo soMyili Uya kuhlala unelizwi lokugqibela malunga nendlela ofuna ngayo iiNtengiso zeBhena yakho ukuba ijongeke.
Musa ukuchitha umzuzu:
Qalisa ukuthengisa kwiNethiwekhi yokuBonisa iGoogle kwangoko.
Clever Ads ukhetho lokuzilayisha ngokuzenzekelayo izibhengezo zakho Google Ads Google Ads kwiNethiwekhi yokuBonisa Google Ads ukuze ungathathi nexesha lokuzilayisha ngokwakho.
Google Ads Veza iphulo ofuna ukulayisha njengebhanile yakho. Kungekudala siza kukwazi Yila amaphulo akho okubonisa
Kutheni le nto uBonisa iiBhendi zakho zenziwe Clever Ads ?
Clever Ads Banner sikunceda ukuba uvelise Google Ads kwaye uzilayishe kwiakhawunti yakho zonke mahala. Kwakhona ukuba nesibhengezo se-AMP kunye ne-HTML5 kunceda ukuba ufumane i-CTR engcono kunye neziphumo zizonke. Yeyiphi enokwenza ukuba uphumelele kakhulu kuhlahlo-lwabiwo mali Google Ads .
Ukwakha izibhengezo Google Ads yokudala kunye nokwenza kakuhle Google Ads kuthatha ixesha elininzi kunye nobuchule. Clever Ads ukonga iiyure zomsebenzi okhe uchithe enye ubhala iikopi zentengiso, uyila ii-mockups, kunye nokufumana izinto eziyilo. Isoftware yethu Google Ads ngoko nangoko ukuba ujonge kwaye uqalise ukutsala ukugcwala kwitrafikhi yakho.
Wakhumbula ukuba wakho Google Banner Ads yanto! Clever Ads enza uqinisekise ukuba ulandela Google Ads zikhokelo zilandelayo neziphathelelene zombini Banner Ads Uyilo kunye solinganiso.
Clever Ads zinokwenza iintengiso zam zesibhengezo ngokuzenzekelayo! Bekufuneka ndenze utshintsho ezimbalwa kuMhleli wabo kwaye babekulungele ukusebenzisa. Kundigcinele ixesha leethoni! ”.
“ ads zam zesibhengezo ads ngokwaliwa nguGoogle ngalo lonke ixesha. Ukusukela oko ndaqala ukusebenzisa Clever Ads , ngoku andisayi kuphinda ndizikhathaze ngale ngxaki ngoba ngoku Clever Ads ukuba ndilandela isikhokelo sikaGoogle kunye nobungakanani bemigangatho ”.
"Nangoku Andikwazi ukungena ngenxa yokuba lo ibhena creator ukhululekile. Zange kufuneke nokuba kukhathazeka malunga nokulayisha iibhanile bam, mna ungabuyela umva kwaye uhlele lonke ixesha kufuneka ukuba uyazihlaziya phezu umhleli! ".
Cwangcisa phezulu-ukuguqula Banner Ads kunye Clever Ads 'Free Banner uMdali
Siza kukucela ukuba ungene kwiakhawunti yakho Google Ads ukuze ulayishe ngokulula iibhena ozenzileyo kwiakhawunti yakho Google Ads ngqo kwaye uqale ukufumana iziphumo kwangoko. Sithatha ubumfihlo bedatha ngokungathí sina kwaye siqokelela kuphela oko sikufunayo ukuze sikunike elona thuba lihle linokwenzeka.